The Machinist (2004) | MM Movie Store
ဒီကားက ကွညျ့ဖူးတဲ့သူတိုငျးညှနျးဆိုကွသလို မဖွဈမနကွေညျ့သငျ့တဲ့ကားရယျလို့ သတျမှတျထားကွတယျ….ဒီကားက အံသွမငျသကျစရာတှမြေားလှတယျ…..
insomniaရောဂါသညျတဈယောကျအဖွဈ Baleကသရုပျဆောငျထားတယျ…ဒီရောဂါက ညဖကျအိပျမပြျောတဲ့ရောဂါ…သူ့ရဲ့ဆိုးကြိုးကတော့ အငျအားခြိနဲ့ပွီး ပိနျလှီလာစတောပဲ.…ကြှနျတော့အထငျပွောရရငျ ဒီကားရဲ့ အဓိက ကြောရိုးလိုဖွဈနတေဲ့ bodyပိုငျးကို အဓိကပွငျဆငျခဲ့ပုံပျေါတယျ….
ဒီလိုပိနျဖို့ baleဟာ နစေ့ဉျလုပျနကြေ gym ကိုလုံးဝရပျတနျ့လိုကျပွီး အစားအစာ အဟာရလုံဝလြော့ခလြိုကျတယျ…သူ့ရဲ့မူလ ၁၇၄ပေါငျကို ပေါငျ ၆၀ထိခပြွီး insomniaရောဂါသညျနဲ့တူအောငျလုပျလိုကျတယျ…
Body Transformation အကွီးကယျြဆုံး top 10 ထဲမှာတောငျပါတယျ…သူ့ရဲ့ပွငျဆငျမှုက ကွောကျစရာကောငျးလှတယျ.နိုငျငံတဈကာရုပျရှငျဆု ၇ဆုတောငျရရှိထားပါတယျ….ဒီကားကမကွညျ့ရသေးသညျ့တိုငျအောငျ တျောတျောမြားမြားရငျးနှီးကွပါတယျ…..
ဇာတျလမျးနဲ့ပတျသကျပွီးမပွောတာအကောငျးဆုံးဖွဈမယျလို့ ယူဆထားလို့ ကြှနျတျောမပွောတော့ပါဘူး…. ဒီကားဟာ ပေးခငျြတဲ့ Message က အရမျးကိုကောငျးပါတယျ…
ပေးခငျြတဲ့ message အရမျးကောငျးတာကို ဘယျလောကျတောငျကောငျးလဲ ဘာကွောငျ့ကောငျးလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျောမပွောပွတတျတဲ့အတှကျ ခှငျ့လှတျပေးပါလို့….
ဒီကားက ကြည့်ဖူးတဲ့သူတိုင်းညွှန်းဆိုကြသလို မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ကားရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြတယ်….ဒီကားက အံသြမင်သက်စရာတွေများလှတယ်…..
insomniaရောဂါသည်တစ်ယောက်အဖြစ် Baleကသရုပ်ဆောင်ထားတယ်…ဒီရောဂါက ညဖက်အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ…သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ အင်အားချိနဲ့ပြီး ပိန်လှီလာစေတာပဲ.…ကျွန်တော့အထင်ပြောရရင် ဒီကားရဲ့ အဓိက ကျောရိုးလိုဖြစ်နေတဲ့ bodyပိုင်းကို အဓိကပြင်ဆင်ခဲ့ပုံပေါ်တယ်….
ဒီလိုပိန်ဖို့ baleဟာ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ gym ကိုလုံးဝရပ်တန့်လိုက်ပြီး အစားအစာ အဟာရလုံဝလျော့ချလိုက်တယ်…သူ့ရဲ့မူလ ၁၇၄ပေါင်ကို ပေါင် ၆၀ထိချပြီး insomniaရောဂါသည်နဲ့တူအောင်လုပ်လိုက်တယ်…
Body Transformation အကြီးကျယ်ဆုံး top 10 ထဲမှာတောင်ပါတယ်…သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုက ကြောက်စရာကောင်းလှတယ်.နိုင်ငံတစ်ကာရုပ်ရှင်ဆု ၇ဆုတောင်ရရှိထားပါတယ်….ဒီကားကမကြည့်ရသေးသည့်တိုင်အောင် တော်တော်များများရင်းနှီးကြပါတယ်…..
ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ယူဆထားလို့ ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး…. ဒီကားဟာ ပေးချင်တဲ့ Message က အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်…
ပေးချင်တဲ့ message အရမ်းကောင်းတာကို ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလဲ ဘာကြောင့်ကောင်းလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်မပြောပြတတ်တဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့….